Madax weynaha La liga Javier Tebas oo infantino ku eedeeyey inuu taageeray Tartanka cusub ee European Super League
Home Horyaalka Spain Madax weynaha La liga Javier Tebas oo infantino ku eedeeyey inuu...
Wareysi uu siiyay wakaaladda wararka ee AFP, Tebas wuxuu ugu yeeray Infantino inuu diido inuu door bidaayo tartanka muranka dhaliyay ee wax ka badali doona muuqaalka kubada cagta Yurub.Â
Tebas ayaa sheegtay in Infantino uu ka shaqeynayay isla markaana dhiirrigelinayay qaabkiisa wuxuuna sheegay in madaxweynaha FIFA xitaa la siin karo door uu ku yeesho horyaal cusub marka la aasaaso.
Markii ay la xiriirtay wakaaladda wararka ee AFP, FIFA waxay tixraacday bayaankeeda bishii Janaayo 21, oo ay saxiixday Infantino waxayna tiri tartan noocan oo kale ah ma aqoonsan doono FIFA ama xiriirka ka dhexeeya.
FIFA waxay intaa ku dartay in koox kasta ama ciyaartoy ka qeyb galaya laga mamnuuci doono tartamada ay soo qaban qaabisay FIFA, sida Koobka Adduunka, in kasta oo aysan caddeyn in tallaabada noocaas ah ay sharci noqon doonto.Â
Hase yeeshe Tebas wuxuu aaminsan yahay in Infantino uu door bidaayo Super League oo xitaa uu ka caawiyay naadiyada inay abaabulaan.
FIFA hay’ad ahaan way cadahay laakiin Infantino ma ahan FIFA hay’adda, waa madaxweynaha waana inuu cadeeyaa mowqifkiisa,\_” ayuu Tebas ku yiri wareysi uu siiyay wakaaladda wararka ee AFP iyo The Sun ee UK
Waa iska cadahay inuu ku lug lahaa shirarka. Wuu ka shaqeynayay oo xitaa wuxuu ku dhiirigelinayay inay dejiyaan.
Tebas ayaa intaas ku daray. Wuxuu u maleeyay in mashruucu fiicnaa.
Markii la weydiiyay sababta Infantino uu u taageeri doono European Super League, Tebas wuxuu yiri: “Waxaa laga yaabaa inuu boos ka heysto mustaqbalka Super League ee uu la wareegi doono. Haddii kale ma fahmi karo.
Dukumentiyo ay ku jiraan faahfaahinta Super League, oo ay ugu horreyso wargayska Ingiriiska ee The Times, ayaa soo jeediyay tartan 20-naadi ah oo ay la socdaan 15 xubnood oo joogto ah.
Waxay ku dari doonaan Premier League ‘Big Six’, iyo sidoo kale Real Madrid iyo Barcelona, iyadoo kooxahaas ay dammaanad qaadayaan balaayiin euro oo dakhli ah.
Tebas wuxuu rumeysan yahay in dukumiintiyada ay muujinayaan in Infantino uu ku lug lahaa wadahadalada. Dukumiintiyada aan hayno waxaa ku xusan magaca ‘W01’ kaasoo si cad u tilmaamaya Mr Infantino. Tebas ayaa yidhi.
Marka waa inuu si deg deg ah u cadeeyo mowqifkiisa, mowqifkiisa shaqsiyeed, inuu si sax ah u sharaxo sababta uu u joogay kulamada qaar kuna dhiiri galiyay mashruuca waqti cayiman.
– ‘Ma dhici doonto’ –
Infantino ayaa ku guuleysatay 24 koox oo FIFA Club World Cup ah oo uu sheegay inay noqon doonaan tartamada ugu fiican adduunka iyo sidoo kale kuwa ugu lacagta badan.
Tebas wuxuu sii waday: “Dukumiintiyada waxaa sidoo kale jira taariikho gaar ah oo dib loogu celinayo Koobka Adduunka, kaasoo qaali u ah Infantino. Waxay Janaayo ka dhigteen lacag la’aan Koobka Aduunka xitaa waxay yiraahdeen yaa qeyb ka noqon doona.
Waa iska cadahay in dadka ku lugta leh sida Madaxweynaha Real Madrid Florentino Perez aysan heli karin faahfaahintaas haddii Infantino ay ka soo horjeedaan,” ayuu raaciyay Tebas.
Real Madrid ayaa ka gaabsatay inay faallo ka bixiso.
Bishii Oktoobar, Infantino wuxuu sheegay inuusan xiiseyneynin European Super League laakiin uu joojiyay inuu xaqiijiyo inuu ka soo horjeedo ama ka soo horjeedo.
Haddii uu soo baxo oo uu yiraahdo run ma ahan oo wuu caddeyn karaa, waan ka raali gelin doonaa ayuu yiri Tebas.
Kubadda cagta qof walba wuu ogyahay qof walba waana ogaannaa wax walba oo socda. Markaan wax iraahdo waa sabab wanaagsan. Waan ogahay runta.
Isaga oo ah madaxa horyaalnimada Spain, Tebas wuxuu ka mid ahaa kuwa ugu codka badan mashruuca Super League, kaasoo uu sheegay inuu Perez ka wado Madrid, iyo sidoo kale milkiilayaasha Mareykanka ee Liverpool, Manchester United iyo AC Milan.
Madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ayaa sheegay in bishii Oktoobar ay kooxdu sidoo kale is qortay.
Khasaaraha dakhliga ka soo baxa masiibada ayaa dardar geliyay wadahadalada, ka dib markii Madrid iyo Barca mid walba uu dhajiyay deyn dhan hal bilyan euro ($ 1.2 bilyan).
Xaaladaha dhaqaale ee Barcelona iyo Real ma ahan kuwo weyn laakiin sidoo kale ma xuma,\_” ayuu yiri Tebas. “Super League waa uun marmarsiinyo ay raadinayaan si ay u dajiyaan riyadan, riyadii uu Florentino Perez lahaa sanado.
“Laakiin inta aan mas’uul ka ahay horyaalnimada Spain ma dhici doonto, taasi waa fikirkeyga,” ayuu yiri Tebas. Nidaamka oo dhan wuu ka soo horjeedaa oo gacmihiisa kuma fadhiyi doono. Waxay u socotaa dagaal.
Previous articleManchester united oo ku dhiban ineey garaacdo kooxaha waaweyn ee EPL.
Next articleMaxaa kala socotaa Qandaraaska Cusub ee lional Messi iyo Qiimaha uu ku kacayo